कस्तो अचम्म ! – ९ बर्षमै प्रहरी बनेका भाइको दुनियाँ चकित पार्ने प्रतिभा, यस्तोसम्म गर्न सक्छन, सोच्नै नसकिने प्रतिभा – Complete Nepali News Portal
कस्तो अचम्म ! – ९ बर्षमै प्रहरी बनेका भाइको दुनियाँ चकित पार्ने प्रतिभा, यस्तोसम्म गर्न सक्छन, सोच्नै नसकिने प्रतिभा
ScotNepal November 24, 2020
काठमाडौ । तपाईले भर्खरै प्रहरी पोशाकमा आए के गर्नुहुन्छ होला ? यसो सोच्नुस त । हो आज हामी तपाईलाई यस्तै सानै उमेरमा प्रहरीको पोशाकमा टिकटक हल्लाएका भाईको बारे कुरा गर्दैछौ । उनको नाम हो पृथ्बी जंग आले मगर, जो बल्ल अहिले ९ बर्षमा लागेका छन । अचम्मको कुरा त के छ भने यिनले गर्ने सबै टिकटक भिडियोहरुमा नेपाल प्रहरीको मात्र पोशाकहरु लगाएका हुन्छन र अहिलेसम्म प्रहरीबाट पनि त्यस्तो कुनै नोटिस नआएको बताउछन यिनी । देख्दा क्युछ र लजालु देखिने पृथ्बी टिकटकमा भने आफनो बाबाको कारण आएको बताउछन र आफनो लगाब पनि दिन प्रतिदिन यसैमा बढदै गईरहेको पनि बताए ।
प्रहरी बनेका भनेर धेरै मिडियामा पनि भाईरल भए तर उनी त्यति सानै उमेरमा कसरी प्रहरी बन्न सक्थे होला र ? भन्ने सबैको सोच पनि आयो र नभन्दै उतm ड्रेस पनि सुटिङको लागि लिएको रहेछ । सानै उमेरका प्रहरीको बर्दी लगाउन पाएका पृथ्बीको लक्ष्य भने ठूलो भएसी प्रहरी बन्नेनै रहेछ त्यसैले उनी यस पोशाकमा सजधजका साथ अभिनय गर्दा रहेछन । अहिलेको जमानामा टिकटकले धेरैलाई यसरी अभिनयमा प्रेरित पनि गरिरहेको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन पृथ्बी हेर्नुस यिनको चकित पार्ने प्रतिभा |
मुख्यमन्त्री शेरधन राई र पुर्व मिस मंगोल जाङ्मु शेर्पाको बिबाह...
सडकका साथी भेट्दा स्टेजमै रोए अशोक, दमकमा चल्यो रुवाबासी, रुदै...
सचिन परियारले रचना रिमालसंग लास्टै रमाइलो गरे, पहिलो गीतको भब्य...
गायिका बुनु श्रेष्ठको स्वर गीत ‘लहरोस चन्द्र सुर्य झण्डा ‘को...
नेवार सुन्दरीहरुको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस नेवा
प्रमिलाको शब्द र रचनाको स्वरमा ‘फर्कि आउ मेरो हजुर ’...